कतारले निकाल्यो नेपाली कामदार, कोठामा बसेको अवस्थामा प्रहरी ल्याएरै पुर्यायो जेल ! – Online Nepal
April 28, 2020 2484
कोभिड–१९ परीक्षण गर्न लागिएको भन्दै कतारी अधिकारीले सयौं आप्रवासी श्रमिकलाई आफ्नो नि’यन्त्रणमा लिएको र त्यसपश्चात कैयौंलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट नि’ष्कासन गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ।
गत फागुन २९ र ३० मा कतार प्रहरीले गि’रफ्तार गरेको २० नेपाली श्रमिकसँग एम्नेस्टीले गरेको अन्तर्वार्तामा उनीहरुले कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने भनेर हिरासतमा लगिएको र त्यहाँ धेरै दिनसम्म राखेर पछि नेपाल फर्काएको बताएका छन्।
नेपाली कामदारलाई नि’यन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले सबैलाई कोभिड–१९ को परीक्षणका लागि लागेको तथा परीक्षण सकिएपछि उनीहरूलाई आ–आफ्नो आवासमा फर्काइदिने भनेको श्रमिकका भनाइ उद्धृत गर्दै एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ।
उनीहरूलाई किन यस्तो व्य’वहार गरिएको थियो भन्ने कुराको स्पष्टीकरण अझैसम्म नपाएको एम्नेस्टीले जनाएको । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी निर्देशक स्टिभ ककबर्नले भनेका छन्, “न त उनीहरूले आफ्नो हिरासत र नि’ष्कास’नविरुद्ध कुनै उजुरी नै गर्न सकेका थिए।अमा’नवीय’रुपमा निकै दिन बिताएपछि धेरैजसोलाई नेपाल जाने विमानमा राख्नु अघि उनीहरूलाई आफ्नो सरसामान ल्याउन पनि दिइएको थिएन।”
कतारी अधिकारीले यो महामारीलाई आप्रवासी श्रमिकविरुद्ध थप गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरिनु दुःखद् भएको एम्नेस्टीले टिप्पणी गरेको छ। “यी दु-व्र्य-वहारमा परेका धेरैजसोले उनीहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण गर्न लागिएको भन्दै प्रहरीले धोका दिएको महसुस गरेका छन्। कोभिड–१९ मानिसलाई स्वेच्छाचरी रूपमा नियन्त्रणमा लिने कुनै बहाना होइन”, एम्नेष्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
परेका आप्रवासी श्रमिकलाई कतारले परिपूरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र उनीहरूले चाहेको खण्डमा कतार फर्कन दिनुपर्ने जनाएको छ । “उनीहरू कार्यरत कम्पनीहरूले श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकलगायत अन्य रोजगार सुविधाहरू यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्दछ”, एम्नेष्टीले भनेको छ।
कसरी भयो गि’रफ्तारी?
गत फागनु २९ र ३० गते सयौँ आप्रवासी श्रमिकलाई प्रहरीले घेरा हालेर निय’न्त्रणमा लियो र दोहाको औद्योगिक क्षेत्र, बारवा शहर र लेबर शहरसमेत विभिन्न भागमा उनीहरूलाई हिरासतमा राखिएको थियो। आफ्नो आवासबाट बाहिर सब्जी खाद्यान्नलगायत सरसामान किनमेल गर्न गएको बेला उनीहरूलाई गि’रफ्तार गरिएको थियो।
त्यसपछि ती श्रमिकलाई बसमा राखियो र औद्योगिक क्षेत्रको हिरासत स्थलमा लगियो जहाँ उनीहरूको कागजात र मोबाइल फोन ज’फत गरियो। उनीहरूको फोटो खिच्नुका साथै औँठाको छाप पनि लिइयो। श्रमिकलाई विभिन्न देशका सयौँ अन्य मानिसहरूसँगै अ’मानवी’य अवस्थामा हिरासतमा राखिएको थियो। उनीहरूलाई खाट र ओड्ने ओछ्याउने नभएको एकदमै भि’डभाडयुक्त कोठाहरूमा पर्याप्त पानी र खानासमेत नदिएर राखिएको थियो।
“जेल मानिसले ख’चाख’च भरिएको थियो । हामीलाई दिनमा जम्मा एउटा रोटी दिइएको थियो जुन अपुग हुन्थ्यो । सबै मानिसलाई भूँइमा राखिएको हुन्थ्यो र खानालाई प्लास्टिकमा राखिएको हुन्थ्यो । भि’डभा’डका कारण कतिपयले त खानेकुरा लिनसमेत सक्दैनथे”, एक श्रमिकले एम्नेष्टीसँग भनेका छन्। अन्तर्वार्ता लिइएका २० जनामा तीन जनाले मात्रै हिरासतमा रहेको बेला उनीहरूको शरीरको तापक्रम मापन गरिएको बताएका थिए।
महिना भयो, श्रमिक नि’ष्का’सन भएको
हिरासतमा रहेको बेलामा एम्नेष्टीले अन्तर्वार्ता लिएको श्रमिकलाई देशबाट नि’ष्का’सन गरिन लागेको बताइएको थियो । केहीले त विमानस्थल लगिँदै गर्दा मात्रै आफूलाई नि’ष्का’सन गर्न लागेको थाहा पाएका थिए। कतिलाई चैत २ मा नि’ष्कासन गरिएको थियो भने अन्यलाई चैत्र ६ मा नि’ष्का’सन गरिएको थियो। कसैले पनि आफूलाई किन हिरासतमा राखिएको वा किन निष्कासन गरेको भनेर कुनै उजुरीसम्म गर्न नपाएको बताइएको छ।
“कतिपयलाई आफ्नो सरसामान मिलाउन लागि केही मिनेटको समय दिइएको थियो भने अन्यलाई त आफ्नो कुनै सामान ल्याउने अवसर समेत दिइएन”, एक आप्रवासी श्रमिकले भनेका छन्, “मलाई ह’तक’डी लगाएर अ’पराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो।
मलाई मेरो क्याम्पमा सामान लिनका लागि लगिएको थियो तर ह’तक’डी लगाएको अवस्थामा मैले कसरी मेरो सरसामान जम्मा गरेर प्याकिङ गर्नु ?” प्रहरीले उनीहरूलाई यदि कुनै गुनासो गरे वा त्यो अवस्थालाई चुनौती दिने कुनै कार्य गरेमा फौजदारी अभियोग लगाइदिने तथा लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने ध’म्की’ दिएको उनीहरुले बताएका थिए।
एम्नेष्टीले अन्तर्वार्ता लिइएका २० मध्ये दुई जनालाई मात्र आफूले काम गरेको कम्पनीले सम्पर्क गरी बाँकी रहेको पारिश्रमिक चु’क्ता गर्ने जनाएको छ। एकजना श्रमिकले भने आफूलाई कम्पनीले पैसा दिएको तर हि’रासतमा रहेको बेला प्रहरीले ‘सुरक्षाका लागि’ भन्दै लगेको र पछि फिर्ता नगरेको बताएका थिए।
सबै श्रमिकहरूले आफूले पाउने पारिश्रमिक र काम छाड्दा पाउने अन्य सुबिधाहरू नलिइकन कतार छाडेका एम्नेष्टीले जनाएको छ। अर्का श्रमिकले एम्नेष्टीसँग भनेका छन्, “अहिले क’ठिन छ। मेरा बालबालिकासँग लगाउने लुगा छैन। उनीहरूलाई खुवाउन अझ कठिन छ ।” अर्का एकजनाले आफूलाई ऋणदाताले ध’म्का’इरहेको र आफ्ना पाँच जना बालबालिकाको लालन पालनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको बताएका थिए।
यता कतारी अधिकारीले भने कोभिड–१९ प्रतिकार्यको हिस्साअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा निरीक्षण गर्ने क्रममा उनीहरु गै’रका’नूनी र अ’नै’ति’क ग’तिवि’धिमा संलग्न रहेको अवस्थामा फेला परेको जवाफ दिएका एम्नेष्टीले जनाएको छ।
प्र’तिवा’द गर्ने अवसर देऊ
एम्नेष्टीले हि’रास’तमा लिइएको र नि’ष्का’सन गर्ने ध’म्की’ दिइएको कुनै पनि आप्रवासी श्रमिकलाई यसो गर्नाको कारण खुलाउन र उनीहरूलाई त्यसको प्र’ति’वाद गर्ने अवसर दिन कतारी अधिकारीसमक्ष आह्वान गरेको छ। कतारी अधिकारीले कोभिड–१९ को सङ्कटका क्रममा आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्यको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गरेको सुनिश्चत गर्नुपर्नेमा पनि एम्नेष्टीले जोड दिएको छ।
Prevको’रोना भाइरस नियन्त्रणका लागि कतारले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री पठाउने
Nextके लकडाउन खुलेको हो काठमाण्डौमा ! सबैलाई पास दिने भए कसको लागि लकडाउन हो ? (तस्विर सहित)
चीनमा फैलियो फेरि यस्तो खतरनाक नयाँ भाइरस, ६० संक्रमित ७ को मृ त्यु
नेपालभरी फैलिदै नक्कली हजारको नोट।कतै तपाइसंग भएको नोट नक्कली त होइन?यसरी चिन्नुहोस
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (61955)